Google Play otu na ụlọ ọrụ iji kwụsị malware | Gam akporosis
Google Play ga - arụ ọrụ na ESET, Lookout na Zimperium iji luso malware ọgụ
Eder Ferreño | | Noticias, Nche
Malware ka bụ nsogbu nkịtị na Google Play. Na ihe karịrị otu oge, ngwa ahụ nwere ụdị nje ma ọ bụ ihe iyi egwu n'ime ụlọ ahịa. Maka nke a, Google na-arụ ọrụ n'ụdị usoro niile ruo oge ụfọdụ, nke iji lụso nsogbu a ọgụ. Firmlọ ọrụ ahụ na-ekwupụta mmekorita ya na ESET, Lookout na Zimperium.
Site na njikọ a, nke akpọrọ App Defense Alliance, ọ na-achọ buso malware agha nke oma na Google Play. Yabụ ị ga - enwe ọsịsọ ọsịsọ, a ga - achọpụta ya tupu ya erute ndị ọrụ. Ọ nwere ike ịbụ a isi nzọụkwụ na nke a maka ike.
Companylọ ọrụ ahụ ahọrọla ndị ha na ya na-arụ ọrụ. Lookout bụ ndị okike nke Lookout Antivirus, Zimperium bụ ụlọ ọrụ pụrụ iche na nchekwa yana ESET bụ ọrụ maka NOD32. Ha niile na Google jikọtara ọnụ, site na Play Protect, iji nyere aka chọpụta malware na Google Play karịa nke ọma.
Ebumnuche bụ ịmepụta usoro nkwukọrịta ụzọ abụọ n'etiti Google na ụlọ ọrụ ndị ọzọ. N'ihi otu ihe ahụ Enwere ike ịkekọrịta ozi iyi egwu ma ọ bụ iyi egwu. Ọ ga-ekwe omume ịkekọrịta nyocha na nchọpụta nyocha, n'ihi ya, usoro niile ga-aka mma.
Na mgbakwunye, Google ga-eso ndị ụlọ ọrụ ndị a kerịta ngwa nke na-echere ka ebipụta ya na Google Play. Nke a ga - enyere gị aka chọpụta malware ma ọ bụ egwu ọ bụla enwere ike nke ahụ dị na ngwa kwuru. N'ụzọ dị otú a, a na-egbochi ngwa a iru ụlọ ahịa na ndị ọrụ ga-ebudata ya na ekwentị ha.
N'akwụkwọ ka ọ dị ka ezigbo ọrụ, nke mechara wepu malware na Google Play. Ajụjụ bụ ma nke a ọ ga-arụ ọrụ na omume yana ọ dị ka ọ dị, ma ọ bụ ụlọ ọrụ ahụ ga-ahapụ anyị na ọrụ nwere ụfọdụ oghere. Anyị ga-ahụ otu o si arụ ọrụ n'ime ọnwa ole na ole sochirinụ. Kedu ihe ị chere?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Nkuzi » Nche » Google Play ga - arụ ọrụ na ESET, Lookout na Zimperium iji luso malware ọgụ
Twitter ga-ewebata ọtụtụ mgbanwe na 2020
Site na igwefoto achọrọ azụ na usoro nke usoro ọmụmụ, Vivo S5 pụtara na ọkwa ọkwa ọhụrụ ya